isearch - Julayi 10, 2017
Yini inombolo ephambili? Amanani amakhulu ahlala ekhona futhi azoqhubeka nokuba khona. AmaGrikhi asendulo abevele ehehwa yizibalo eziphambili futhi anikezela izifundo ezibanzi kubo. Ubufakazi babo ...
amafutha isearch - March 1, 2020 0
Amafutha kalamula - okungaphezu kwephunga elimnandi lekamelo Lapho ufunda igama elithi uwoyela kalamula, into yokuqala eyafika emqondweni kwaba amakhandlela noma iphunga lekamelo. Eqinisweni, ngaphezu kwalokho okumnandi ...
amathoyizi isearch - Okthoba 13, 2018 0
Nguwe umphathi esizeni sokwakha! Ngomthwalo we-LENA Worxx othwala amasondo, ungavula indawo yakho yokwakha osebeni kanye nasekhaya, enkulisa noma e-sandpit. Imoto yokwakha ikunikeza amathuba amaningi futhi ...
amafutha isearch - August 17, 2018 0
uwoyela linseed: Amafutha ama-Linseed anamnandi, anempilo futhi enza izinto eziningi kubhekwe kuwo njengamafutha aphile kahle amakhulu amaningi eminyaka. Isizathu salokhu sikhona ngokuyinhloko ekwakhiweni okunempilo futhi okunempilo kwezakhi zomzimba kanye namafutha acid. Amafutha ancibilikile manje asetshenziswa yi ...
injabulo isearch - August 16, 2018 0
AmaJalimane amaningi aphuza izinkomishi eziningana zekhofi usuku lonke: isiphuzo esishisayo singesinye seziphuzo ezidumile kakhulu ngenxa yokunambitheka kwayo okuyingqayizivele. Lapho ubhontshisi wekhofi uvela khona, noma kunjalo, kuphela abambalwa abacela-ngenkathi ...
Yebo, unempilo isearch - Juni 11, 2018 0
I-coral yolwandle isendaweni yethu yaseYurophu njengendlela yokwelashwa engenzeka ekhanyisa isiko eside, engaziwa kahle. Noma kunjalo, udumo nokusebenza kwalo mbhalo we-polyp fossil kubukeka njengesikhathi eside kakhulu ...
amafutha isearch - Juni 3, 2018 0
Amafutha kakhukhunathi - intokozo kuwo wonke umzimba kawoyela kakhukhunathi isetshenziselwe iminyaka ukusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle. Ngenxa yezithako zayo ezibalulekile, uwoyela ungadambisa noma ulaphe izifo eziningi. Isayensi ...
I-Apple ine-flagship yayo entsha, i I-iPhone X wathunyelwa emncintiswaneni. Kodwa ingabe igcina isithembiso sayo noma ngabe isimemezelo siphelele kakhulu? Yini okusha? Ngokuqinisekile i-iPhone ...
Izindiza ezilawulwa kude ziyaziwa kakhulu phakathi kwentsha nabantu abadala. Ngezinye izikhathi ziyinkimbinkimbi futhi zingaphezu nje kwetheyipi. Amamodeli amancane aklanyelwe ngqo indiza yasendlini, ngenkathi iningi lendiza yezimoto ...
amathoyizi isearch - Okthoba 30, 2017 0
I-quadrocopters manje ingenye yezindiza ezithandwa kakhulu zomsakazo. Ezinikezwe ekuqaleni ku-helicopter elawulwa kude, kusukela ngaleso sikhathi baye badala isigaba sabo njenge-multicopter. I-Multicopter imele indiza yezimoto, okungaphezu kokubili ku ...
Imishini isearch - Okthoba 29, 2017 0
Isiteshi sesitimela siqinisekisa isikhathi esihle nomsebenzi wokusiza. Ngakho umehluko emithonjeni evamile ngakho kucacile. Umama wesifazane nomninindlu bayazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukugqoka okwesibhakabhaka okusempilweni yokusebenza kwansuku zonke ...
Amathuluzi engadini namathuluzi engadini isearch - Okthoba 28, 2017 0
Yini umtshina wensimbi? Igama lisho konke ngaphandle: umtshina wensimbi ukhombisa izinsimbi. Izitholi zensimbi ziza ngemiklamo ehlukahlukene nangezinhloso ezahlukahlukene. Zisetshenziselwa ukuthola izinsimbi noma izinto zensimbi. Ngo ...
Imishini isearch - Okthoba 26, 2017 0
I-Roomba 980 yi-iRobot iyisidingo esingazi lutho. Akekho okufanele akhathazeke ngesisekelo, ngoba kunezinketho eziningi zokududuza, ukusebenza okulula kanye ne-...
Die amaphoyisa umngani wakho nomsizi wakho, ngakho-ke amaphoyisa ahanjiswa njalo. Kepha luhlobo luni lwemisebenzi amaphoyisa anayo futhi ihlelwe kanjani? Amaphoyisa wombuso Ngokomthetho, iPOLISI ayikho eJalimane ....
Isikweletu semali esingu-5 sinenkampani noma umphakathi, izwakala okuningi. Kodwa lesi samba esiyisibonelo asihlinzeki ngolwazi mayelana nesikweletu senkampani, umasipala noma umbuso ...
Isikhwama sesaphulelo sokushintshaniswa ngokuvamile sigijima phakathi kwamabhange amabili. Uma ibhange lingasenayo imali, lingakholeka imali kwenye ibhange. Lokhu ke isaphulelo sokukhokha. Lesi sikweletu ...
Udinga isikweletu? Manje ungasebenzisa izinketho ezihlukahlukene. Kubalulekile ukuba uthole isikweletu sokuthi ukhokha. Kunoma yikuphi, qiniseka ukuthi unele ngokwanele ...
Noma ubani owamukela isikweletu uyakwazi ukuyibuyisela futhi abuyise ngezindlela ezihlukahlukene. Enye yalezi zindlela ukuhlukaniswa kube yizinkokhelo eziningana, ngakho-ke ukukhokha okuyingxenye njalo kubizwa ngokuthi izinga. Enjalo ...
Imalimboleko Engalungile Imalimboleko Engalungile imane isho imalimboleko lapho lowo obolekayo kufanele abuyisele imali encane kunaleyo ayibolekile ekupheleni kwethemu. Lokho kuzwakala kukuhle kakhulu ...
Ake sithi ufuna ukuthatha imali mboleko noma wenze isicelo ebhange? Ngemuva kwalokho kudlala indima enkulu ukuthi uzazise ngazo zonke izinhlobo zezinto futhi okubandakanya ukwanda. Lapha ...
Imalimboleko yangempela Ukwehlukahlukana kwemalimboleko yisikweletu sangempela. Ngokuphikisana nokubolekwa kwendabuko ngemali engenayo yanyanga zonke, ukuphepha kusetshenziselwa ukuphepha ngale ndlela yokuboleka. Ngakho-ke ...
Indawo yokubhuka isetshenziselwa ukugcina inzalo yesithakazelo isikhathi esithile ngaphandle kwesibopho sokuthatha imali empeleni. Ibhange linikeza isibambiso somuntu othize ...
(Ebizwa nangokuthi ibhekene lokushintshaniswa ehlukile), isithembiso esibophezelayo sombonakude kuya kumthethosivivinywa wokushintshaniswa kufanele ukhokhelwe kumthethosivivinywa wokushintshaniswa. Imininingwane ye-drawe ...
Yini okweletwayo yokuqasha: Konke kufanelekile ukwazi ngesikweletu sokuqasha Abantu abaningi kakhulu baseJalimane baphuze ngokweqile. Izikweletu uqobo lwazo alungeni engozini ukuba khona, kepha uma kuyisikweletu esiqashiswayo, ungathola indawo yakho yokuhlala ...
Ukuthengwa komqashi Uma uphupha futhi nekhaya lakho, kepha njengamanje ungenazo imali ezidingekayo, khona-ke ukuthenga okungaqashwa kungakujabulisa. Umgomo wokuqasha impahla Kulesi ehlukile ...
isearch - Okthoba 16, 2017 0